အင်းလေ ဓါတ်ပုံအမှန်တင်တော့လည်းမယုံကြ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အင်းလေ ဓါတ်ပုံအမှန်တင်တော့လည်းမယုံကြ
- မိဆိုလာ ဂဲ
Posted by မိဆိုလာ ဂဲ on Apr 6, 2013 in Copy/Paste | 24 comments
ရိုးသားစွာခင်မင်မှူ့နဲ့ ဆိုရှယ် နက်ဝေါကင်းလုပ်နေတာကိုလဲ လူတချို့ကအမျိုးမျိုးထင်နေတယ်
နောက် တချို့လူတွေက ရိ့သဲသဲ နဲ့ ဒါတွေကမြန်မာယဉ်ကျေးမှူ့တွေ ကြားမှာ အချိုးတွေ အကျင့်တွေ ပြောင်းသင့်နေတာကြာလှပါပြီနော် တချို့ဆို မိန်းကလေးအချင်းချင်းတောင် ရိသဲ့သဲ့နဲ့နော်…..
About မိဆိုလာ ဂဲ
မိဆိုလာ ဂဲ has written4post in this Website..
View all posts by မိဆိုလာ ဂဲ →
ဘယ်သူတွေ မယုံယုံ ကိုကိုအံ ယုံတယ်ကွယ် …
နောက်ခါ စိတ်ဆိုးရဘူးနော် …
အဲဒါ ဘယ်သူတွေလဲက ဒီ နေမလေးကိုပြောတာ
အပေါ်က ငအံစာ မင်း မဟုတ်လား
ဘယ်သူဘယ်လိုပြောပြော ပျော်ပျော်သာ နေကွယ်။
Iiမည်သူယုံသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်မှန်ဖို့ ဘဲလိုပါတယ်
ရိခြင်း ထေ့ခြင်းငေါ့ခြင်း စသောအကြောင်းအရာစကားလုံးတို့အား
သက်ရောက်မှုပမာဏသည် မိမိ၏ခံစားမှု၌သာ မူတည်သည်ဖြစ်၍
အကယ်၍သင်သည် ထိုးစကားတို့အား ဂရုမစိုက်မူ မည်သို့မျှခံစားရမည်မဟုတ်ပေ။
မန်းလေးဂေဇက်ကတော့ ရောက်လာသူမှန်သမျှကို ရင်းရင်းနှီးနှီးနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ စတတ်နောက်တတ်ကြပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ရွာထဲကို လူအသစ်ရောက်လာရင်
ကျမဘယ်သူပါ ကျနော်ဘယ်သူပါဆို မိတ်ဆက်ကြတာပါ။
အရင်က စာရေးချင်တဲ့လူက ဒီအတိုင်းဝင်ရေး
ကော်မင်းရေးသူကလဲ သူ့ဘာသာသူ ၀င်ရေး ရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အလိုလိုရင်းနှီးသွားကြတာပါဘဲ။
အဲတော့ ဘယ်သူကမှ ကြိုဆိုပါတယ်မလုပ်သလို ဘယ်သူက မှလဲ ၀င်ပြီးစတာနောက်တာ ရိသဲ့သဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
သေချာတွေးကြည့်ရင်တော့ မသိသူတွေ မိတ်ဆွေဖြစ်နေတော့ အွန်လိုင်းကို အွန်လိုင်းလို သဘောထားနိုင်ရင် စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။.
တမီးဒို့က ယောင်းယောင်းလေးကို ချိလို့ စ ဒါဘာလို့။
နွေးထွေးဇွာ ကြိုဆိုသလိုဖစ်အောင် အမျိုးတော်မိတာဘာလို့။
မောင်လေးဒွေ အကိုဂျီးတွေကလည်း မြှောက်ပေးလို့ဘာလို့။
ညီမလေးဒွေကလည်း သူငယ်ချင်း ဖွဲ့ချင်လို့ဘာလို့။
ဟိ… တောင်မလေးက ချောတော့ မမဂျီးတွေ ယောင်းမတော်ချင်ဒါပေါ့ရို့…
အနော်တောင် စိတ်ထဲက တော်နေတော… ၀င်မရေးဖစ်သေးရို့…
ချိတ်မချိုးပါနဲ့ တနယ်ဂျင်းရယ်… ဒို့ဒွေဆိုလည်း.. သားရှင်အဖေတွေကို ယောက္ခမတော်၊ တစ်ခါတစ်ခါ မမွေးသေးတဲ့သူတွေပါ လှမ်းတော်… အဲ.. သမီးမွေးလာရင်တော့ အီလည်လည်နဲ့ပေါ့.. မောင်ရှင်တွေဆိုလည်းယောင်းမတော်… အဲ့လို အဲ့လို ခင်မင်ဂျဒါဘာကွီ… အဟဲ.. ရိသဲ့သဲ့ဆိုဒါဂိုဒေါ့ တညိုးမထင်ပါနှင့်.. တူဒို့လည်းခင်ဒတ်လို့ဘာ…
ဆိုလာဂဲလ် ရဲ့ ဂါဗီယာဂဲလ်..
ဂဲလေးရယ် … (ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကို ပေါဒါ)
ပျော့ဘာဒေါ့လားကွယ် … နော့ ..
ကိုကိုအံ လေ …
ဂဲလေးမှ ပြန်စကား မပြောရင်လေ …
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေပလိုက်မှာ …
သူညားဒွေက ခင်လို့ စဂျဒါနော် .. ရို့ …
သတ်သေမယ့် နည်းလမ်းလေးလည်း မေးကြည့်ပါအုံး။
ရေမရှိတဲ့ချောင်း နှာခေါင်းဖော်တဲ့နည်း ဖြစ်နေအုံးမယ်။
ရွာထဲမှာ လူကြီးတွေလည်းရှိ၊ ကလေးတွေလည်းရှိ ဆိုတော့….
ကာလသားတွေခမျာ ရွာသူလေးအသစ်တစ်ယောက်ရောက်လာရင် စုပြုံတိုးရတာမို့ ဦးအောင် စ သွားကြတာ။
အားမနာနဲ့ ပြန်သာ စ နောက်လိုက်။
အိမ်းး တနယ်ဂျင်း စိတ်ဆိုးတာကိုးကွဲ့ ရွာအကြောင်းပေါင်းကြည့်မှ သိမှာပါကွယ် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ နာဆို ပျော်လွန်းလို့ အခုလောကကြီးကို ဘောင်ခတ်ကြည့်ရတော့မယ် မကန်းရုံတစ်မယ်ဘဲ
မိန်းခေးအချင်းချင်းရိသဲံ့သဲ့တဲ့ နားလည်ဘူးနော် … :hee:
၀ါး…… ခေသူတော့မဟုတ်ဘူးပဲ ရဲရင့်ပွင်းလင်းချက်ကတော့9လောက်ရှိတယ် ၊
ငါ့ညီမလေးကို ဘယ်သူတွေအနိုင်ကျင့်ကြသတုန်းကွယ် မမရွှေကြည်ကိုပြော
အသစ်လေးဆိုတော့ ရင်းနှီးပျော်ရွှင်အောင် ၀ိုင်းစကြတာနေမှာပါ။ စိတ်ဆိုးရဘူးနော် လိမ္မာတယ်။
မမရွှေကြည်တို့ကတော့ ဒီလိုပဲပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုးလေး ခိုးဝင်လာလိုက်တာပါပဲကွယ် ရေးစရာရှိရင်ရေးတယ် ရင်ဖွင့်စရာရှိရင်ဖွင့်တယ် ဒီရွာမှာ မျက်နှာထုတ်ပြစရာမလိုသလို မိတ်ဆက်စရာလည်းမလိုပါဘူးကွယ်။ (ဆက်တော့လည်းကောင်းသပေါ့။) ဒါပေမယ့်အပြုသဘောဆောင်မယ့် ဝေဖန်ရေးတွေ၊ ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတော့ လွတ်လပ်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါရဲ့။
သူကဘယ်သူဆိုတာထက် သူကဘယ်လိုတွေးခေါ်တယ်ဆိုတာက ဒီရွာမှာပိုအရေးပါတယ်လို့ မမရွှေကြည်ကခံယူထားပါရဲ့။
မီးလေးကို ဘယ်သူတွေ.. ရိသဲ့သဲ့လုပ်လဲဝေ့..
ပြောပြချမ်းဘာ.. အူးရွှေဂေါင်းလို ဂတုံးဖြစ်အောင်..
အစ အဆုံး တုံးပလိုက်မယ်…
ဓါတ်ပုံပြန်တင်လိုက်ဘာ.. မီးလေးပုံက သဂျီးကြော်ငြာတင်ထားတဲ့
၀က်စတမ်းယူနီယမ်းက မိန်းကလေးထက် ပိုချောပါဒယ်အေ..
ကဲဗျာ..ရွာလူကြီး…ဦးကျောက်ဂဲ ရေ ဆိုလာဂဲ ကိုရိသဲ့သဲ့လုပ်ကုန်ပြီတဲ့။
ကျန်း ကျန်း… အခုမှတွေ့တယ်…
နောက်ဆုံးစာလုံး အသံထွက်တူတာမို့ ရွာ့ဆွေမျိုးတော်မယ်ထင်ရဲ့…
ရွာသားများ “တကယ်” ဆိုရင် ဦးကျောက်ကိုလာပြော…ဟီ ဟိ
ဒါ စစွာတဲ့ ပိုစ့်လား။
ခါးလေးထောက် မျက်လုံးစိမ်းနဲ့ အဲလိုမကြည့်နဲ့လေ။
၇ွာသူရွာသားတွေ ပျော်တတ်တာ ခင်တတ်တာ ဒီကွန်မင့်လေးတွေက သက်သေခံနေသလိုပါပဲ…။
ဆိုလာက စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူး သိအောင်ပြောပြတာပါ တခါတလေကြရင် လူတွေက ထင်တတ်တာ ကိုယ်လုပ်တာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ် အမြင်တခုထဲကြည့်တာကို သူဘက်ကိုယ်ဘက် မှာဆိုရင် အဲဒီလူဘာမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်မကြိုက်တာ ကိုယ်ကိုယ်ကို မလိမ်ညာကြေး ဥပမာ ငါဒီလူ ကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေ နဲ့စိတ်ထဲမှာ ထားပြီးရေတယ်ဆိုတာ သိထားပြီးသားဘဲ ကာယကံရှင်ကလေ ရန်လုပ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး မိတ်ဆက်တုန်းက တချို့ကွန်မန့်တွေက တခုခု ဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့ အရိပ်ရောင်တွေ သိရတယ် အားလုံးကို ချစ်ခင်ပါတယ် နော်
ရိုးရှင်းလှတဲ့ ဂဇက်ရွာ ၊
နာလာကျိတော့ ဘာမှလည်း ချိတော့ဝူးးးး
ဘာတွေပြလို့ .. ဘာတွေ ကျိဘီး ဘီလို ဖြစ်ကြပါလိမ့်တော် ။
ဒါ့ပုံကို … တင်ပြီး ပြန်ဖျက်လို့ ရတယ် ဆိုကတည်းက ..သာမန်ရွာသူတော့ ဟုတ်လောက်ဘူးနော် …. အခွင့်ထူးခံဖြစ်မယ်ထင်တယ် ….. ။
တချို့ချို့သော …. ရွာသူား အသစ်တွေက .. ပို့စ်တင်ပြီး အက်ဒစ်လုပ်ခွင့်မချိတေးတာ တိထားပါဒယ် … ။ ခိခိ ….